जनचेतनाको कमिले मुटुरोगको समयमै पहिचान (Diagnosis of Heart Disease) नभएर लाखौ मानिस असामयिक मृत्युको शिकार हुनपुग्छन् । मुटुरोग प्राणघातक रोग हो र समयमै उचित उपचार (Treatment) नहुनु यसको जटिलताको (Complication)
बलेवा । चिसो बढेपछि बागलुङको एक विद्यालय बन्द गरिएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका– ५ अधिकारी चौरमा रहेको ज्योति विकास आधारभूत विद्यालय आगामी फागुनसम्मका लागि बन्द गरिएको हो । चिसोले
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज (शनिबार) नयाँ दिल्लीमा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई सिंहलाई भेट्न नयाँ दिल्लीको अकबर रोडस्थित
म्याग्दी । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर होम आइसोलेशनमा बसेका म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरस्थित प्रभु बैंकको शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीको जागिर गुमेको छ । एक्सलेन्ट सेक्युरिटी प्रालिमार्फत प्रभु बैंकको सो
तौल घटाउनका लागि मानिसहरुले केसम्म गर्दैनन् र ? चिसो बिहानीमा ‘मोर्निङ वाक’का जाने भन्दै दौडिनेदेखि जिममा गएर पसिना बगाउनेसम्मका लागि तयार हुन्छन् । तर, अपेक्षित नतिजा भने हात लागेको हुँदैन
पर्वत । बाटोमा हिँडिरहेका व्यक्तिको सिक्री तथा झोला, मोटरसाइकल र स्कुटर प्रयोग गरी चोरी गर्ने गिरोह पर्वतमा पनि सक्रिय रहेको भेटिएको छ । मोटरसाइकल र स्कुटरमा सवार चोरले बाटोमा हिँड्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा अदालतलाई राय दिन गठित एमिकस क्युरीका सदस्यले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थपेर सुनुवाई गर्न सुझाव दिएका छन् । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १३
कसरी जोगिने मुटु रोगबाट ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय मानिसहरुको जीवनशैली र खानपानमा आएका परिवर्तनका कारण मानिसहरुमा दीर्घ खालको रोगहरुमा वृद्धि भएको छ । स्वस्थकर खानपान, जीवनशैलीमा परिवर्तन शारीरिक श्रम लगायतको काम गर्न सके स्वास्थ्य
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ– एमिकस क्युरीको राय सुन्दै न्यायाधीश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका सदस्यले बोल्न सुरू गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको इजलासमा शुक्रवार प्रधानमन्त्री
सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीले भने- संसद् विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र लाने व्यवस्था छैन
काठमाडौ‌ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही भनेर सर्वोच्चमा बहसका लागि उपस्थित सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीहरूले संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र लाने संवैधानिक र कानुनी